Raysalwasaaraha UK Theresa May oo Is-casishay • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Raysalwasaaraha UK Theresa May oo Is-casishay
May 24, 2019 - By: Hanad Askar
Theresa May ayaa ugu danbeyn iscasishay kadib markii ay sadex-goor ku fashilantay inay ku guuleysato heshiiska dalka UK uu uga baxayo Midowga Yurub.
Waxay sheegtay May inay xilka ka degi doonto 7da bisha June, isla markaana ka codsatay Xisbigeeda inay soo doortaan Raysalwasaare cusub.
Ms.May oo shir jaraa’iid ku qabatay magaalada London ayaa sheegtay in markii ay xilka qabatay qorshaheeda uu ahaa in ay meel mariso Aftidii shacabka dalkaasi uu sanadkii 2016 ugu codeeyeen inay ka baxaan EU-da, balse dadaal dheer kadib ay garwaaqsatay in ay ku guuleysan weyday in heshiisyadii ay soo diyaarisay uu ansixiyo Baarlamaanka dalkaasi oo si weyn ugu kala qeybsan qaabka wadankaasi uga baxayo Midowga Yurub.
Intii ay xilka heysay waxaa u suurto gashay Ms.May inay heshiisyo la gaarto hogaamiyayaasha wadamada kale ee Midowga Yurub oo ogolaaday in wakhti dib loo dhigo xiligii dalkaasi uu ka bixi lahaa Midowgaasi oo ahayd dhamaadkii bishii Maarso ee sanadkan, heshiiskaasi May ay la gaartay EU-da ayaa lagu qeexayey qaabka ay UK iyo EU-da usii wada shaqeyn doonaan dhanka Amniga, Xaduudaha, Ganacsiga iyo Iskaashiga, hase yeeshee Xildhibaanada UK ayaa diiday dhamaan heshiisyadaasi.
Midowga Yurub ayaa ogolaaday in illaa dhamaadka bisha Oktoober ee sanadkan wakhti lasiiyo dowlada UK inay isaga baxaan EU-da, waxaana la ogeyn qaabka Raysalwasaaraha cusub ee UK ee xilka qaban doona uu ku xalin doono ismarin-waaga ka dhex taagan Baarlamaanka dalkaasi.
Haweenaydan oo horey usoo noqotay Wasiirka Arrimaha Gudaha ayaa ahayd haweenaydii labaad oo Raysalwasaare ka noqota wadanka UK, waxayna xilka qabatay kadib markii uu is-casilay Raysalwasaarihii iyada ka horeeyey David Cameron kadib markii uu ku fashialay aftidii uu qabtay 2016 oo ahayd midii ay shacabka dalkaasi ugu codeeyeen inay ka baxaan EU-da.